SomaliTalk.com » 2015 » January » 27
Home » Archive Maalinta January 27th, 2015
RW. Cumar oo caawa ku dhawaaqay xukuumad ka kooban 20 Wasiir
Muqdisho, 27, Jan, 2015. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Cumar Cabidrashid Cali Sharmarke ayaa caawa ku dhawaaqay Golaha Wasiirada, kadib wadatashi uu la yeeshay madaxweynaha, gudoonka baarlamaanka, xildhiibanada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, Golahaan Wasiirada ayaa waxay ka kooban yihiin 20 wasiir, iyadoo si dib laga soo magacaabayo Wasiiro Ku-xigeenada iyo Wasiiro Dowlayaasha. Ra’iisul...
Daawo Baraf iyo Dabaylo Xoogan ayaa ku dhufatay Gobolada Waqooyi Bari ee dalka Maraykanka Video
Gobolada Waqooyi Bari ee dalka Maraykanka ayaa xaalad deg deg ah lagu soo rogay ka dib Baraf iyo Dabaylo Qabow wata uu ka dhuftay 9 Gobol oo ka tirsan Waqooyi Beri ee Ameerica. Barafkani ayaa la sheegay in uu yahay mid taariikhi ah iyadoo Saxaafada Maraykanka si weyn u hadal heyso waxaana gebi ahaan la joojiyey isu socodka Gaadiidka iyo Duulimaadyada Sidoo kale Waxaa la xeray iskuulada waxaana la...
Minnesota: Wiil 13-jir ayaa Dhintay kaddib markii walaalkiis Xabbad kaga fakatay
Booliska magaalada Eagan (oo kaabiga ku haysa Minneapolis) ayaa sheegay in wiil 13-sano-jir ah uu dhintay kaddib markii xabad kaga fakatay walaalkiis oo 15-sano-jir ah. Wiilka dhintay waxaa magaciisu ahaa Suhayb Jamal Hassan. Arrintan ayaa dhacday Axadii la soo dhaafay (Jan 25, 2015) kaddib markii uu barqanimadii 11:07am uu booliska soo wacay wiilka 15-jirka ah oo ku wargeliyey. Suhayb Jamal Hassan....
Magaalada Muqdisho waxaa ka furmey Shirweynihii Afaraad ee Dalladda SOSCENSA ,waxaana uu shirkaaasi ka dhacay Hotelka Makka Al Mukarama ka soo socdey muddo Seddex maamlmood ah 26ka, 27ka, iyo 28 /01/2015. Shirweynahaasi oo labadii sano mar la qabto, waxaa ka soo qayb galey xubnaha Dalladda oo ka kooban 60 Dalladood , iyo ka badan 40 goob joogayaal oo shirka lagu casuumey, ujeedada shirka oo ahaa...